कुलमान वि*रु*द्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले हाले मु**द्दा | नेपालीहरुको चि**त्कार: भन्छन् छिटो उ'द्धार गर्नुस (भिडियो हेर्नुहोस) - Onlines Time
कुलमान वि*रु*द्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले हाले मु**द्दा | नेपालीहरुको चि**त्कार: भन्छन् छिटो उ’द्धार गर्नुस (भिडियो हेर्नुहोस)
August 18, 2021 onlinestimeLeaveaComment on कुलमान वि*रु*द्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले हाले मु**द्दा | नेपालीहरुको चि**त्कार: भन्छन् छिटो उ’द्धार गर्नुस (भिडियो हेर्नुहोस)
ओला स्कुटर लन्च भएसँगै सिम्पल वानले पनि ई–स्कुटर लन्च गरेको छ । जसको मूल्य १ लाख १० हजार भारु तोकिएको छ । उक्त स्कुटर १९४७ भारुमा बुकिङ सुरु भइसकेको छ । सिम्पल वान इलेक्ट्रिक स्कुटरले फुल चार्जमा २४० किलोमिटरको रेन्ज प्रदान गर्ने कम्पनीले दावी गरेको छ ।
४ कलर अप्सन
इलेक्ट्रिक स्कुटरमा स्पोर्ट डिजाइन र डिजिटल कस्टमाइज ड्यासबोर्ड उपलब्ध रहेको छ । साथै ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी र टायर मनिटरिङ सिस्टम पनि उपलब्ध रहेको छ । सो स्कुटर रातो, सेतो, कालो र निलो रङमा उपलब्ध छ ।
लिथियम आयोन ब्याट्री
सो स्कुटर कम्पनीको भारतमा पहिलो स्कुटर हो । जसको प्रतिस्पर्धा एथर ४५०एक्स र ओला स्कुटरसँग हुनेछ । सिम्पल वान इलेक्ट्रिकमा ४.८ केडब्ल्युएच लिथियम आयोन ब्याट्री समावेश गरिएको छ । उक्त ब्याट्री फुल चार्जमा इको मोडमा २४० किलोमिटरको दुरी तय गर्ने क्षमताको रहेको छ ।
सो स्कुटर ३.६ सेकेन्डमा ५० किलोमिटर प्रति घन्टाको स्पिडमा गुड्ने क्षमता रहेको छ । यसको टप स्पिड १०० किलोमिटर प्रतिघन्टा रहेको छ । सो इलेक्ट्रिक स्कुटर भारतमा उपलब्ध सबै इलेक्ट्रिक स्कुटर भन्दा बढी रेन्ज प्रदान गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
तमिलनाडु राज्यमा प्लान्ट
कम्पनीले तमिलनाडुको होसुरमा २ लाख वर्गफुटमा प्लान्ट तयार गरिरहेको छ । पहिलो चरण सिम्पल वान इलेक्ट्रिक स्कुटर महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश र गुजरात सहित १३ राज्यमा लन्च गरिनेछ ।
धतुरेले कान्छी बु’ढी ल्याएपछि जेठी र कान्छीको अन्तर्वार्तामै कु’टाकु’ट ! धतुरेलाई छुट्याउन हम्मे हम्मे (भिडियो हेर्नुहोस)
आहा ! भगवान् जस्ता श्रिमानले अनितालाई यसरी सिन्दुर लगाइदिए (हेर्नुस् भिडियो )
बिहेको दिन रमेश प्रसाईलाई हेर्नुहोस्… जीवन साथीसँग रमेशको रमाइलो ठट्टा , रमेशले आफैले पढे मन्त्र
December 6, 2020 December 6, 2020 onlinestime
आफ्नै छोरीलाई क रणी गरेको आ रोपमा नेपाली सेनाका जम्दार प क्राउ,अन्य छोराछोरी भन्छन् बुबा निर्दोष हुनुन्छ (भिडियो हेर्नुस्)
September 20, 2021 onlinestime
Ravi Lamichhane – New TV Station सीधा कुरा जनतासंग को नयाँ सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक (सबै लाई जानकारीका लागि सेयर गराै)